कालीगण्डकीमा दुई किशोर बेपत्ता के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
कालीगण्डकीमा दुई किशोर बेपत्ता के छ अवस्था ?
काठमाडौँ। कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्न गएका दुई किशोर बेपत्ता भएका छन। बिहीबार दिउँसो करिब १ बजेको समयमा बाग्लुङ नगरपालिका १ निर्यघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको किनारमा पौडी खेल्दै गर्दा दुई किशोर बेपत्ता भएका हुन्।
बेपत्ता हुनेमा बाग्लुङ नगरपालिका ४ उपल्लाचौर बस्ने हरि विकका १३ वर्षीय छोरा अभिषेक विक र सोही स्थानका थमबहादुर पुनका छोरा १३ वर्षीय यमबहादुर पुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक इकवाल हवारीले जानकारी दिए।
दुई युवासँगै पौडी खेलन गएका स्थानीय प्रश्न विक खाती र विसान पुन भने सकुशल रहेका छन्। कालीगण्डकी किनारमा चारजना नै पौडी खेल्ने क्रममा दुईजनालाई नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता दुईजनाको प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको हवारीले जानकारी दिए।